Madaxweyne Xasan oo ugu baaqay beesha caalamka dhawrista qarannimada dalka. - Wargeyska Faafiye
Home 2014 November 3 .Warka Madaxweyne Xasan oo ugu baaqay beesha caalamka dhawrista qarannimada dalka.
Madaxweyne Xasan oo ugu baaqay beesha caalamka dhawrista qarannimada dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay dhawrto qarannimada Soomaaliya.
Jaamacadii ugu horeysay ee Master bixisay.
Duqeyntii Muqdisho oo la cambaareeyay
Weerar lagu Qaaday Hoteel Saxafi iyo Al-shabaab oo sheegatay Mas'uuliyada weerarka.